राष्ट्रपतिको कदममा भीम रावलको कडा पर्तिक्रिया — Imandarmedia.com
राष्ट्रपतिको कदममा भीम रावलको कडा पर्तिक्रिया
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गरेपछि एमाले माधव नेपाल समूहका नेता भीम रावलको प्रतिक्रिया आएको छ ।
उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ (४) ऐच्छिक नभइ बाध्यकारी भएको भन्दै यसलाई छल्न नमिल्ने बताएका छन् । ‘नागरिकता देशको अस्मिता र अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो । यसलाई कुर्सीको खेलसँग कदापि जोड्नु हुन्न । नागरिकताबारे संविधान सभामा धेरै बहस भइ संविधानमा लेखिएको भन्दा फरक किसिमले जानु नेपाल र नेपालीको हित विरूद्ध हुन्छ,’ रावलले भनेका छन् ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध गएको प्रमाणित भएको बताएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानका विरुद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रचण्डले यो क्षम्य नहुने बताए ।
राष्ट्रपतिले विहीबार साँझ २३ घण्टाको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि प्रचण्डले भने, ‘यो ठूलो षड्यन्त्र हो । संविधान र लोकतन्त्रमाथिको अर्को घात हो ।’
राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसम्म जाने काँग्रेसको तयारी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कडा कदम चाल्ने भएको छ । शुक्रबार बिहान ९ बजे काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बस्ने पार्टी पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र संसदीय दलका पदाधिकारीको बैठकपछि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइने काँग्रेस नेताहरुले बताएका छन् ।
काँग्रेस नेता रमेश लेखकले राष्ट्रपतिबाट विहीबार जारी नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी आह्वानबारे चर्चा गर्दै भने, ‘यो त अति भयो । यो देशमा संविधान विधि, पद्दति केही पनि छैन भन्ने कुराको नमुना हो यो । यो विषयमा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
संविधानको गम्भीर उल्लंघनको घटना एकपछि अर्को हुन थालेकाले काँग्रेसले कडा कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको लेखकको भनाइ छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि खतरा पैदा भएको लेखकले बताए ।
राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग पास हुने अवस्था नबनेपनि त्यो ठाउँसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । काँग्रेस नेता लेखकले भने, ‘भोलि यो लडाइँमा महाअभियोग पास होला न होला, अलग कुरा हो । तर, त्यो ठाउँसम्म जाने कुरा हो यो ।’ महाअभियोग पास हुन संसदको दुई तिहाइ चाहिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
विपक्षी दलसँग महाअभियोग पास गर्ने गणित भने छैन । शुक्रबार बिहानको बैठकमा यिनै विषयमा छलफल हुने लेखकले बताए । उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने हो कि ? अथवा महाअभियोग पनि लिएर जाने हो कि ? वा अर्को सरकार बनाउनका लागि तयारी गर्ने हो कि, यिनै विषयमा छलफल हुन्छ ।’
विहीबार साँझ आफूसँगको भएको कुराकानीमा यसबारे छलफल गर्न देउवा पनि तयार भएको लेखकले बताए । यसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि सहमत नै देखिएको बुझिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्नु संसद विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको पौडेलको टिप्पणी छ ।
यस्तै काँग्रेसका नेता गगन थापाले पनि महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई बिदा गर्नुपर्ने बताएका छन् । थापाले भने, ‘विश्वासको मत लिन मन नलागे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रकृया शुरु गर्ने हो नेतागण, के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाएर यो गरेको हो ? जानेर गरेको हो । गनगन गरेर नबसौँ । सुझबुझ पुर्याऔं र यिनले दिएको समयअगावै नयाँ सरकार बनाएर ओलीलाई बिदा गरौं, महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई बिदा गरौं ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विपक्षी दलहरूलाई पनि संविधान र संसद बचाउन शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सुझावका छन् । ‘संसद बचाउने हो भने भोलि नै यो प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव राख्नुपर्छ र नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तावित गरेर संसदबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा संसद बाँच्न जरुरी छ ।’